12 | November | 2019 | Danya Wadi
By danyawadi November 12, 2019 Leaveacomment
More than 730,000 Rohingya Muslims fled to neighbouring Bangladesh after the 2017 crackdown by Myanmar’s military. A file photo of Rohingya Muslim refugees. | Dibyangshu Sarkar/AFP Gambian Justice Minister Abubacarr Tambadou on Monday said they have filedacase against Myanmar at the United Nations’ International Court of Justice, accusing it of committing genocide against […]
11 နိုဝင်ဘာ၊ 2019 သားညွန့်ဦး (Zawgyi/Unicode) ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေအပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုကျုးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲဆိုချက်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အမြင်ဆုံးတရားရုံးကို ဂန်ဘီယာနိုင်ငံက ဒီကနေ့ပဲ အမှုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံချင်းဖြစ်တဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေကို ကိုင်တွယ် အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ICJ နိုင်ငံတကာခုံရုံးထံ အခုလိုအမှုတင်သွင်းရတာဟာ ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ် လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကြီးက လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူးဆိုတာ ပြသချင်တာဖြစ်တယ်လို့ ဂန်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ကိုသားညွန့်ဦး က ဆက်ပြီး ပြောပြပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေး နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖေါက်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ Gambia နိုင်ငံက ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ အမှုတင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို ဆန့်ကျင်ရုံသာမက မဖြစ်အောင် […]
12 နိုဝင်ဘာ၊ 2019 မသိင်္ဂီထိုက် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ICC ခုံရုံး အစီရင်ခံစာ တုံ့ပြန်ဆွေးနွေေးနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆို င်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း။ (ဓာတ်ပုံ – United Nations) (Zawgyi / Unicode) လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို မြန်မာ အစိုးရဘက်က ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပင်မ တရားရေး အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်တဲ့ ICJ – နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ အမှုတင်သွင်း လိုက်တာမှာ ဥပဒေ အရ လုပ်လာရင် ဥပဒေကြောင်းအရ ပြန်တုံ့ပြန်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။ အစ္စလာမ္မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး […]